निर्वाचनले पेट्रोल-डिजलको खपत उच्च दरमा, दैनिक कति खर्च भइरहेको छ इन्धन ? | NepalManch
निर्वाचनले पेट्रोल-डिजलको खपत उच्च दरमा, दैनिक कति खर्च भइरहेको छ इन्धन ?
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका कारण देशभर पेट्रोलियम पदार्थको खपत उच्च दरमा बढेको छ । दलहरुको भडि्कलो प्रचार र चुनावी मोटरसाइकल र्‍याली लगायतका कारण यही चुनावी माहोलमा नेपालमा इन्धनको खपतको नयाँ रेकर्ड नै राखेको छ । पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर उच्च् दरमा घाटा खेपिरहेको निगमलाई यसले थप दबाबमा पारेको छ ।
चुनावी प्रचार प्रसारका कारण दैनिक पौन ३ अर्ब रुपैयासम्मँ इन्धनमा खर्च भइरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । जुन खपत सामान्य दिनको भन्दा निकै धेरै हो । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय चुनावी प्रचारप्रसार तीव्र हुँदै गर्दा इन्धनको खपतको पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएको बनाएको बताउँछन् ।
१९ वैशाखमा डिजल र पेट्रोलको बिक्रीमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको निगमले जनाएको छ । सो दिन एकैदिन १० हजार ४ सय किलोलिटर डिजल र ४ हजार ९१० किलोलिटर पेट्रोल बिक्री भएको थियो, सो दिनमा ४९५ किलोलिटर हवाइ इन्धन पनि बि्रकी भएको निगमले जनाएको छ । १९ वैशाखमा पेट्रोल, डिजल र हवाइ इन्धन मात्रै २ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको त्रिjmी भएको थियो ।